Vola sandoka : Tsy mety mandray Ar 10 000 ireo mpivarotra ao Anosibe
Mailo ireo mpivarotra. Tamin’ny zoma teo no nahatratrarana vola sandoka Ar 10 000 miisa 144 tao amin’ny tsenan’Anosibe.
Vokatr’izay dia maro amin’ireo mpivarotra ao an-toerana no matahotra ka tsy mety mandray ny vola taratasy Ar 10 000 na ny vola taratasy Ar 5 000 ihany koa aza.
« Tsy fantatra mihitsy ilay vola sandoka ka matahotra izahay », araka ny fanamarihan’ny mpivarotra ovy iray. « Sarotra ny nanavaka ilay vola sandoka amin’ny tena izy », hoy kosa ny mpivarotra hafa. Mahatsiaro sahirana manoloana izany ihany ireo mpanjifa, satria sarotra ihany koa ny mitady vola madinika. « Anontanian’ireo mpivarotra raha Ar 10 000 ny vola dia tsy mety mandray izy », hoy ny renim-pianakaviana iray omaly. Misy amin’ireo mpivarotra no mahavatra mamerina ny entana ka tsy mandray ilay vola.
« Matetika amin’ny fotoanan’ny tsenan’ny tantsaha vao maraina no manararaotra ireo mpampiasa vola sandoka, satria mbola maizimaizina ny andro », hoy Ramanoelina Mbolatiana, komity miara-mitantana ny tsena ao Anosibe. Manoloana izany dia nanamarika ity tompon’andraikitra ity fa efa misy ny lamina noraisiina hiarahan’ny mpitandro ny filaminana sivily sy ny komity mpitantana ny tsena ary ireo mpivarotra mba hisorohana ny tahotry ny olona.
Miteraka savorovoro mantsy izao fandavana vola taratasy ataon’ny mpivarotra izao.